သွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic ခပ်သိမ်းသော
YAYIDA - သွားဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ သွားကုလားထိုင်နှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ LED အလင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သောသွားဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူ
Ti-Max M500 / M500L Handpiece Rotor Fedier နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Yayida သွားဘက်ဆိုင်ရာအလှည့်အငှား
1. ပိတ်ထားသော-type အမျိုးအစားကျည်တောင့်, မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံ2. Wear-ခံနိုင်ရည်နှင့်တာရှည်ခံ, တည်ငြိမ်မြန်နှုန်းTi-Max M500 / M500L နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ 3.4. Push ကိုခလုတ်သည့်အရာတစ်ခုပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်စမ်းသပ်ခံရ 5.6. ကြွေ bearingစွမ်းဆောင်ရည်အချိုးမှပြီးပြည့်စုံသောဦးခေါင်းအရွယ်အစားနှင့်အတူ 7. အမြင့်ပါဝါ။
W H ကို Alegra TE-95 handpiece ရဟတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်သဟဇာတ YAYIDA သွား handpiece အနိမ့်ဆူညံသံကျည်တောင့်
1. Open ကို-type အမျိုးအစားကျည်တောင့်, မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံ2. Wear-ခံနိုင်ရည်နှင့်တာရှည်ခံ, တည်ငြိမ်မြန်နှုန်းW H ကို Alegra TE-95 နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ 3.4. Push ကိုခလုတ်သည့်အရာတစ်ခုပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်စမ်းသပ်ခံရ 5.6. ကြွေ bearing7. တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်အပေါ်ယံပိုင်းနဲ့ကုသသောအဆိုပါမျက်နှာပြင်, မြင့်မားခြစ်ခုခံ, ကောင်းတစ်ဦးချုပ်ကိုင်နှင့်ချေးတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသေချာ။
Yayida သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ကိုင်လက်ကိုင်ခလုတ်ကို Sinora T3 Handpiece Rotor Fedier နှင့်လိုက်ဖက်သည်
1. Open ကို-type အမျိုးအစားကျည်တောင့်, မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံ2. Wear-ခံနိုင်ရည်နှင့်တာရှည်ခံ, တည်ငြိမ်မြန်နှုန်းSinora T3 နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ 3.4. Push ကိုခလုတ်သည့်အရာတစ်ခုပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်စမ်းသပ်ခံရ 5.6. ကြွေ bearing7. ဌာနမှူးဦးထုပ်ချည်ပိုကောင်းဝန်ဆောင်မှုအသက်တာ၏တိုးချဲ့ရှားလော့ပြုလုပ်ရန်ရဲ့ကောင်းညစ်ပတ်, o-လက်စွပ်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံအတူပါလာ။
Ti-Max X600 / X600L handpiece ရဟတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်သဟဇာတ YAYIDA ကြွေ bearing သွား handpiece သည့်အရာတစ်ခု
1. Open-type cartridge, အရည်အသွေးမြင့်ခြင်းနှင့်တာရှည်ခံ23. Ti-Max X600 / X600L နှင့်သဟဇာတ4. ခလုတ်ကိုတွန်းပါ5. dynamic ချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး6. ကြွေထည် bearingအရည်အသွေးမြင့်မားသောဖုံးအုပ်ထားသည့်မျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြထားသောမျက်နှာပြင်သည်မြင့်မားသောခြစ်ရာခံမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
YAYIDA ကုမ္ပဏီတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ရောင်းပြီး ၀ န်ဆောင်မှုအရှိန်ပြင်းသောအသင်းတစ်ခုရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ တစ်နေရာတည်းတွင်စျေး ၀ ယ်ခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပါ။
"အရည်အသွေးပထမ၊ ဝန်ဆောင်မှုပထမ" ။ တင်သွင်းသောကုန်ကြမ်းများ၊ ကိရိယာများ၊ လ်တာများနှင့်တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတူများသို့ချဉ်းကပ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။
ကုမ္ပဏီသည် ISO13485 ထုတ်လုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်သည်။ ငါတို့သည် OEM / ODM ဝန်ဆောင်မှုပေး။
YAYIDA သွားဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီသည်အမြန်နှုန်းနှင့်အနိမ့်မြန်သောသွားဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ အထူးကုသွားဘက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်များကိုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုခဲ့သည်။
YAYIDA ကုမ္ပဏီတွင်ဂျပန်မှကွဲပြားသောမော်ဒယ်များ NomuRADS စက်ရှိသည်။ ဖောက်သည်၏တိကျသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်သည်။ ဖောက်သည်၏အထူးထုတ်ကုန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ရန်အများပြည်သူနှင့်အခြားမည်သည့်ရောင်းသူကိုမျှရောင်းရန်မတောင်းဆိုပါ။
ကုမ္ပဏီသည် ISO13485 ထုတ်လုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်။
သွားဘက်ဆိုင်ရာ LED မြန်နှုန်းမြင့်လက်ကိုင် AYD-SLCM4
ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ လာရောက်၍ အမြန်မြန်သောလက်ကိုင်အမိန့်နှင့်အမြန်နှုန်းလက်ကိုင်အမိန့်ကိုပြုလုပ်လိုကြသည်။ သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့၏သွားလက်ကိုင်ပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဒါဟာရှည်လျားသော corperation ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျနော်တို့သေချာပါတယ်။ သုံးစွဲသူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်လာပြီးအရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကို ဆက်၍ တိုးတက်စေမည်။